Really chọrọ n’ezie ịrụ ọrụ maka mmalite? | Martech Zone
Enweghị mmetụta dị njọ karịa na mgbe ị na-achụpụ gị n'ọrụ. Enyere m aka na buut banyere 6 afọ gara aga mgbe m rụrụ ọrụ maka akwụkwọ akụkọ mpaghara. Ọ bụ ihe dị mkpa na ndụ m na ọrụ m. Ekwesịrị m ikpebi ma m ga-alụ ọgụ maka nnukwu ihe ịga nke ọma - ma ọ bụ na m ga-ada ala ma ọ bụ na agaghị m ala.
N’ileghachi anya azụ, ọnọdụ m bụ n’ezie ọfụma. Ahapụrụ m ụlọ ọrụ na-achọ ịnwụ ma hapụ ụlọ ọrụ m maara ugbu a otu n’ime ndị kacha njọ n’ọrụ na-arụ ọrụ.
N’ụlọ ọrụ mmalite, a na-emegide nsogbu nke ihe ịga nke ọma megide gị. Ọnụ ndị ọrụ na nloghachi bụ otu n'ime itinye ego na-enweghị isi na ụlọ ọrụ mmalite nwere ike ịme. Ezigbo ndị ọrụ nwere ike ịkwalite azụmaahịa, ịchụ ego na-ezighi ezi nwere ike lie ya.
Ihe ọzọ na - eme na mmalite mmalite na - aga nke ọma. Ndị ọrụ were otu ụbọchị nwere ike ịhapụ ịhapụ ndị ọzọ. Otu ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ ise dị oke iche karịa ụlọ ọrụ nwere 10, 25, 100, 400, wdg.
N’afọ atọ gara aga, arụrụla m ọrụ na mmalite mmalite 3.
Otu mmalite outgrew m processes usoro na n'ígwé nke management togbuo m na m nwere na-ahapụ. Ọ bụghị ha kpatara ya, n'ezie ọ bụ na enweghịzi m 'ndabara' na ụlọ ọrụ ahụ. Ha na-eme nke ọma ma na-asọpụrụ m. Enweghị m ike ịnọ ebe ahụ ọzọ.
Mbido ọzọ mere ka ike gwụ m! Arụrụ m ọrụ na ụlọ ọrụ siri ike, maka ụlọ ọrụ na-enweghị ego. Enyere m otu afọ nke ọrụ m ma nye ha ihe niile m nwere - ma ọ nweghị ụzọ m ga-esi nọgide na-agba ọsọ ahụ.
Anọ m na mmalite ugbu a ọ na-adị m mma. Anyị dị ihe dị ka ndị ọrụ 25 ugbu a. Ọ ga-amasị m ikwupụta nchekwube na ọ ga-abụ ụlọ ọrụ m lara ezumike nká; agbanyeghi, nsogbu ndị ahụ na-emegide m! Mgbe anyị kụrụ narị ndị ọrụ ole na ole, anyị ga-ahụ otu m ga-esi nagide. Oge a, a bụ m isi ihe ga-eme ka ụlọ ọrụ ahụ nwee ihe ịga nke ọma ka m nwee ike ịnọ 'karịa nsogbu' nke ọrụ gọọmentị ma gbalịsie ike ijigide ọgbụgba na ọganihu site na nnukwu uto.
Fọdụ ụfọdụ nwere ike iche na mmalite bụ onye arụrụ ọrụ obi ọjọọ ma ọ bụrụ na ha nwere nnukwu ndị ọrụ. Ekwetaghị m otú ahụ ...… startups with no churn nchegbu m ọtụtụ ihe ndị ọzọ. E nwere ọkwa na ndụ mmalite nke na-arụ ọrụ na ọsọ ọsọ ọsọ ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ guzobere. Ga-eyi ụfọdụ ndị ọrụ pụọ ma ị ga-eto karịa karịa. O di nwute, ndị ọrụ dị obere na mmalite ka ohere gị nke mpụta ga-adị obere.
Nke a nwere ike daa ụda, ma ọ ga-akara m mma ịmalite ịmalite ọkara ndị ọrụ karịa ịhapụ ya niile.
Ya mere,… ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka na-arụ ọrụ maka a mmalite, na-netwọk gị nso na ngwaahịa pụọ ​​ụfọdụ ego na nkwadebe. Mụta site na ahụmịhe otu ị nwere ike - otu afọ na mbido ahụike nwere ike ịnye gị afọ iri nke ahụmịhe. Karịsịa, nweta akpụkpọ anụ.
Ọ ga - amasị m ka m ghara ịrụ ọrụ maka mmalite? Uh ... nope. Obi ụtọ, nsogbu kwa ụbọchị, nhazi nke atumatu, uto nke ndị ọrụ, ịbịakwute onye isi ahịa key ndị a bụ ahụmịhe niile dị ịtụnanya nke agaghị m achọ ịhapụ!
Chọpụta ihe ị dị mma na ya, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na a duru gị n'ọnụ ụzọ, ma dịrị njikere ịwakpo ohere ọzọ na-esote site na ahụmịhe dị oke ọnụ ị wuru.
Ihe a nile yiri eziokwu! M nwere ike maa na-agba akaebe na ọtụtụ n'ime isi ihe ndị a, mmalite na 10 ọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche mgbe o nwere ụfọdụ ihe ịga nke ọma na 100 ọrụ, wdg Ọ bụ mgbe niile na-akpali ịhụ na ọ na-aga.
Otu ihe m chọpụtara bụ ịrụ ọrụ maka obere mbido emebisiwo m! Agaghị m eche n’echiche na m ga-alaghachi n’ụbọchị ahụ.
Ọmarịcha post! Arụrụ m ọrụ m niile maka mmalite na m dee edemede maka blọọgụ m banyere mmalite.
Enwere otutu ihe siri ike banyere ụwa mmalite ndị na-atụle ya ga-ama:
1. Workingrụ ọrụ maka mmalite bụ ịgba chaa chaa ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọ na ọkwa onye ọlụlụ / nke onye nwe gị. Otu ndaba nwere ike imebi nzukọ niile. Ahụwo m imirikiti mbido na-ada, n'ihi na otu onye guzobere mere mkpebi onwe ya naanị iji mebie ụlọ ọrụ ahụ.
2. riesgwọ ọnwa dị ihe dịka 40% n ’ọkwa ọkwa nke nnukwu ụlọ ọrụ. Enweghi ike iji tụnyere uru (ọtụtụ oge).
3. Ọtụtụ oge, izu ọrụ na-adị ogologo oge karịa nke ụlọ ọrụ ụwa.
4. Ikekwe ụlọ ọrụ gị ga-aga n'okpuru oge gị… banyere 60% (dabere na onye mere nyocha na ọnụọgụ).
5. have ga-abụ ma crazy, dị ka ramen noodles, ma ọ bụ nwere ego na-enye gị ohere ihe ize ndụ.
Enwere m ọrụ na mbido na mmalite sitere na 20 ruo 100 mmadụ na afọ 2 (ma ka na-eto eto) ọzọ nke si na 10-50 n'ime ọnwa 6 (ha ka na-azụ ahịa). Mana ekwesịrị m imechi otu ma hapụ nke ọzọ, n'ihi na amaara m na ha ga-aga n'okpuru (ọzọ). Nwere ike ijikwa volatility ahụ?
Mbido ụwa bụ maka ndị nwere afọ maka ya ma dịkwa njikere ịdị na-agbanwe oke. Ọ bụrụ na ị nọghị, pụọ.
Ọ dị ka azụmahịa ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ihe niile dị mma / ihunanya / mara mma site na mpụga, mana Ọcha dị n'ime. Onye ọ bụla nke gwara gị na ọ dị elu, jupụta gị maara ihe, ma ọ bụ drankụọ nnukwu koolaid.
Apolinaras - daalụ nke ukwuu maka ntinye gị na nke a. Ọ bụ ndụ na-atọ ụtọ, n'ezie - ndị na-eto eto nọ n'ọrụ mbụ ha kwesịrị ịghọta nnukwu ọdịiche.
Ekwenyere m na echiche gị banyere ịmalite ịmalite n'ozuzu. A ghaghi ikwu ya, na ahụmịhe niile na mmalite mmalite dabere na ikike iduzi nke onye guzobere (s).
Ọchịchị na-adịghị mma na maka okwu ahụ n'okpuru njikwa njikwa njikwa na-edugakarị na ahụmịhe na-adịghị mma ebe ezigbo onye ndu na ikike njikwa njikwa karịa nwere ike ime ka ahụmịhe ahụ baa uru ma azụmaahịa a ga-aga nke ọma ma ọ bụ daa.
Ekwenyeghị m na ahụmịhe ‘dum’ dị n’aka ndị guzobere ya. Ọtụtụ oge ndị guzobere bụ ndị ọchụnta ego na ndị echiche. Mgbe ụfọdụ ha anaghị eme nke ọma na ego ọrụ, ire ahịa, ire ahịa, ịkpata ego, arụmọrụ, wdg - echeghị m na ị ga-ata ha ụta maka enweghị nkà niile.
A na-amanye ndị mbịambịa ịpụ n'ụkwụ ma tinye nnukwu ego na nka - ụfọdụ na-arụ ọrụ, ụfọdụ anaghị eme ihe n'eziokwu. Dị ka Apolinaras si kwuo, nke ahụ nwere ike iburu ụlọ ọrụ ahụ dum.
Ntọala na-eme ihe kachasị mma site na ihe ha nwere. Mgbe ụfọdụ ezughị. Nke ahụ bụ ihe ize ndụ nke mmalite!
Ezigbo isiokwu! Na ihe ndị na-esonụ. Echere m na ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ọrụ mma ụlọ na obodo ọhụrụ ka ọ bụrụ onye a ma ama, ọ ga-adịrịrị mfe. Ọ bụrụ na ị bụ n'ezie ma na-emepe emepe karịa azụmaahịa ụlọ, ọ ga-abụrịrị ọnya. Mgbe ị gara ịrụ ọrụ maka otu, ị ga-adị njikere ịnweta ogo na ala na ndị nwe ya.
Agbanyeghị na ị nwere ike iche na ị ghọtara nke ahụ, rue mgbe ị nọ ebe ahụ…
Edemede dị ukwuu na-abịa n'oge. Na-eche maka ịkwaga site na mgbe m nọ n'ihi na ejighị m n'aka ihe uto enwere maka m oge ụfọdụ. Enwere ihe m chọrọ ịmụ na enweghị ike rue ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ree mkpachị na ya. Ọ bụ ihe ịma aka mgbe gị na ụlọ ọrụ HR na-arụ ọrụ.
Otú ọ dị, opoprtunity m na-ahụ na mere ka m tụlee ya ọbụna karị bụ a mmalite mgbasa ozi gị n'ụlọnga .. litantic n'okporo ámá si n'ụlọ m. Isiokwu a ga - eme ka m chee echiche n ’ọnwa ole na ole sochirinụ wee hụ ebe obi m dị.
Jenụwarị 8, 2009 na 12:37 PM
Akwa post. O mere m niile chụọ n'ọrụ ka mmetụta na obere ụlọ ọrụ m bi - er, ọrụ - na. Ọ bụghị mmalite, mana ọ na-agbanwe mgbe niile.
Jenụwarị 8, 2009 na 5:22 PM
M gụsịrị akwụkwọ afọ abụọ gara aga ma gbalịa inweta ụgwọ ọrụ n'ọtụtụ mmalite. Enwere m nsogbu. Echere m mgbe niile na nkà m na ụkpụrụ omume ga-adabara adaba maka mmalite. Enwere m olileanya ịmalite otu ma ọ bụ rụọ ọrụ maka otu na ọnọdụ m ọzọ, oge ọ bụla nke ahụ nwere ike ịbụ.
Jenụwarị 8, 2009 na 7:42 PM
Echere m na ịrụ ọrụ maka mmalite ga-adị mma. Mana ọ sitere na echiche m chọrọ ịbụ onye ọchụnta ego na ọ masịrị m nrịgo na mgbago na ndụ ndụ siri ike. Nke ahụ bụ ihe m ga-atụ anya na mmalite nke m na-echeghị na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ ga-enye m.
Agbanyeghị, enwere m ike ịhụ otu ụdị ndụ ahụ agaghị adabara onye ọ bụla nke mere na ọ dabere na ihe ị na-achọ n'ọrụ.
Jenụwarị 8, 2009 na 8:07 PM
Ezi post, dị ka ọ dị na mbụ.
M na-ekwenye na gị, n'ozuzu.
Mana, isi ihe ole na ole bụ:
1) Ọ bụ alụmdi na nwunye - M na-enye, ị na-enye.
Oge ụfọdụ nke ahụ furu efu n’ime ntụgharị okwu na mbido. Nhọrọ ntanetị nwere ike ịbụ akara aka ọla edo dị mma na nke a, mana ịmalite ịmalite nke na-akwụ ụgwọ dị oke ọnụ ahịa na-abụkarị ndị na-arụ ọrụ na-enweghị isi, ọkachasị n'ihi na ụgwọ ọnwa na mbido anaghị adịkarị na ahịa.
2) vdị na arụmọrụ
O di nwute, ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite iwe iwe iwe iwe ma ọlị ma mee mkpebi. Chọrọ ka nke a bụrụ arụmọrụ dabere na ya
3) Ndu ndú bụ isi
Onye ọchụnta ego enweghị ikike niile, mana ha kwesiri inwe amamihe iji mezue adịghị ike ha ma gee ndị gbara ha gburugburu ntị n'ụzọ bara uru.
4) Imebigawanye onye ọrụ
Nke a dị mma na akwụkwọ, mana ọ bụghị nye onye ọrụ nke na-aghọtaghị etu nka ha siri ghara ije ije, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị isi na ndị ọrụ anaghị eto eto na-enweghị ọrụ zuru oke iji dozie onwe ha ịjụ ajụjụ, dịka ọ na-abụkarị ikpe na ụlọ ọrụ ọhụụ.
5) Ndị mmadụ na-ele anya maka # 1
Nsonaazụ na-adịghị mma nke ntụgharị ndị ọrụ dị elu nke na-abụghị afọ ofufo adịghị mma. Mkpali site na egwu anaghị adị mma. Ndị mmadụ na-adịghị na-aga ọrụ na ha ọzọ ọrụ n'uche, ma ọ bụrụ na ndị enyi ịda na malitegharịa ego.
N'ozuzu, ọzọ, ekwenyere m n'ọtụtụ ihe ị kwuru, mana echere m na ị na-elele nke a na ugegbe rosy.
Ndị mbido nke kachasị nwee ọfụma na oge ugbu a (Google) na-akwanyere ndị ọrụ ùgwù, ọ bụghị dị ka ndị akwụ ụgwọ iji jiri rụọ ọrụ nwere ọgụgụ isi.
Ihe m na-alaghachi mgbe niile na gburugburu mmalite dị mma - ọ bụrụ na ị nwere ike iwulite mmekọrịta na mmekọrịta gị na onye ndu gị mgbe ahụ ọ dabara adaba. Ọ bụrụ na ndị ndu gị enweghị ntụpọ, nkwụnye aka, net-net, ịkpụ na akpọnwụ ma hapụ gị ịkọ isi gị mgbe ị na-ahụ ihe nke ha site na 2 ma ọ bụ 3X mgbe ahụ ha enwetaghị ya ma bụrụ ndị ha na-eduhie. onwe ya na enweghị nchebe.
Jenụwarị 8, 2009 na 8:08 PM
Naanị ihe dị iche n'etiti mmalite na ụlọ ọrụ guzobere bụ afọ nke nzukọ ahụ.
E wezụga nke ahụ, ọ bụla ụlọ ọrụ nwere ike ịchọ ndị ọrụ ogologo oge, nye ha nri ehihie n'efu, kwụghachi ndị mmadụ ụgwọ ma ọ bụ nabata echiche ọhụrụ. Mbido ndị akwadoro azụmaahịa nwere ike ịnwe nde mmadụ n'ụlọ akụ, yana ụlọ ọrụ ndị gbara afọ 100 nwere ike ihu nsogbu okwu ego. Ndị isi mara mma ma dị egwu na-ezo ebe niile.
Afọ ụlọ ọrụ ekwesịghị ịkọwa mkpebi gị gbasara ọrụ gị, mana ọdịbendị na nkwenkwe nke ndị nọ na nzukọ ahụ. Ajụla ma ịchọrọ ịrụ ọrụ maka mmalite. Chọpụta àgwà ndị masịrị gị na ụlọ ọrụ na-akpali akpali. Eleghara ụbọchị nke mgbakwunye anya ma soro nrọ gị.
Jenụwarị 8, 2009 na 10:39 PM
Aga m eji nkwanye ugwu kwenye, Robby.
Afọ abụghị naanị ihe dị iche. Ọtụtụ mgbe Startups na-arụ ọrụ site na ego agbaziri ego na obere ego na ikike mmadụ. Ha na-enwe nnukwu nrụgide na-eto eto ma na-erute ezigbo cashflow ngwa ngwa o kwere mee.
Omenala na nkwenkwe kafere site na nlanarị dị ọcha na mbido ụlọ ọrụ. Lelee nnukwu ụlọ ọrụ ọ bụla taa nwere omenaala na nkwenkwe ị na-achọ ma m ga-agba chaa chaa ntakịrị na ha enweghị ohere ndị ahụ mgbe ha jikọtara ego, ụgwọ, na ịzaghachi ndị na-eme mkpọtụ!
Enwere ndị ọrụ ebere na ndị 'green' ole na ole na-arụ ọrụ m, mana anyị enweghị uru ọ bụla iji nyere aka ịgbanwe ụwa (mana).
Jenụwarị 9, 2009 na 7:21 PM
Nkwupụta gị gosipụtara isi edemede gị, nke m kwenyere bụ ịsị na enwere ọdịiche dị egwu, isi na mmetụta dị n'etiti ndị na-eto eto na ndị okenye. Agbanyeghị, ana m ahụ ihe ndị a:
I dere maka ulo oru ndi “na-aru oru na ego igbaziri na ego na ego ndi mmadu. Ha na-enwe nnukwu nrụgide itolite ma na-enweta ezigbo ego na ngwa ngwa o kwere mee. ” Nke a dị ka nkọwa nke nnukwu ụgbọala atọ, otu n'ime ọtụtụ ụlọ akụ na-adịbeghị anya dara ada, ma ọ bụ n'ezie ọ bụla ụlọ ọrụ na-agba mgba. Ọ bụghị naanị na mmalite.
Also na-ekwu na “ọdịbendị na nkwenkwe karịrị nnọọ nlanarị dị ọcha na mbido ụlọ ọrụ.” Ma ọ bụ enweghị ike ịnwụ bụ ihe chụpụrụ gị na nnukwu ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ? Imp na-egosi na ọ bụ ebe jọgburu onwe ya ịrụ ọrụ mana ọ bụghị gị malitere mmalite.
N'ikpeazụ, isi okwu nke atọ gị yiri ka afọ ojuju na "inye aka ịgbanwe ụwa" chọrọ uru. Kiva, Freenet na n'ezie GNU / Linux bụ mbido niile abaara ụwa uru, na-enweghị nnukwu echiche maka uru nke ha.
Isi okwu m dị iche. Ọ bụ ezie na enwere ike ụfọdụ àgwà ndị nwere mmekọrịta chiri anya, naanị otu ọdịiche dị n'etiti ụlọ ọrụ mmalite na ndị were ọrụ ọdịnala bụ afọ. Aga m agbagha onye ọ bụla na-atụle ịchụ (ma ọ bụ izere) ọrụ na mbido ịjụ onwe ha ihe nkwenkwe banyere afọ emeela ka echiche ha pụta.
Echeghị m na ozi a bụ naanị agụmakwụkwọ ma ọ bụ pedantic. Mgbe ị na-ekpebi ebe ịchọrọ ịrụ ọrụ, afọ ụlọ ọrụ bụ ebe na-adịghị mma ịmalite. Kama nke ahụ, mmadụ kwesịrị ịtụle ụlọ ọrụ, ụkpụrụ, ụkpụrụ omume ọrụ, omenaala ebe ọrụ, yana ndị mmadụ ndị ị na-ahụ na nzukọ ọ bụla.
Ebumnuche ebumnuche maka mmalite ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọdịnala bụ, n'uche nke m, ụdị afọ ndụ. Dị ka ndị na-achọ ọrụ na-akpa ókè, anyị kwesịrị inyocha ndị were ha n'ọrụ ndabere nke njirisi bara uru. Nke a anaghị agụnye ụbọchị nnabata.
Jenụwarị 9, 2009 na 4:40 PM
Anọ m ọrụ maka mmalite maka ọnwa 5 gara aga ma nwee obi ụtọ. Anyị na-etinye ntakịrị ihe onwunwe anyị n'ime nhazi saịtị na mmezi nzuzo. Enwere ọtụtụ obi uto maka ọdịnihu nke afọ na-esote dịka ọ kwesịrị iso ndị nọ na mbido. Amaara m na a ga-enwekwu ọrụ ịbịa na ntinye nke saịtị ahụ karịa ọnwa 6 sochirinụ, mana enwere olile anya na ọ ga-akwụ ụgwọ ma anaghị m eyi ya. Ọ bụghị maka onye ọ bụla, mana achọghị m ọrụ ọdịnala.